porn ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသက်ရောက်မှု | ဖောင်ဒေးရှင်းကဆုချ
ပင်မစာမျက်နှာ ကျန်းမာရေး Porn ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှု
လူငယ်များစွာသည်ညစ်ညမ်းမှုကိုအရွယ်ရောက်ပြီးသောလိင်ကမ္ဘာနှင့်ပတ်သက်သောအတွေးအခေါ်ရင်းမြစ်တစ်ခုဖြစ်သည့်ညစ်ညမ်းသောနည်းလမ်းကိုလက်စွဲအဖြစ်မြင်ကြသည်။ ၀ မ်းနည်းစရာကောင်းတာကညစ်ညမ်း ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွေဟာအန္တရာယ်၊ သူတို့သည်မိမိတို့ကိုယ်ကိုပျော်ရွှင်မှု၊ စွဲစေနိုင်သောအရာများနှင့်အပြုအမူများအားလုံးကဲ့သို့ပင်၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများသည်အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ဦး နှောက်ကိုအကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲစေပြီးကိုယ်ခန္ဓာ၏အခြားအစိတ်အပိုင်းများကိုထိခိုက်စေသည့်အပြုအမူများကိုအားပေးအားမြှောက်ပြုနိုင်သည်။ ညစ်ညမ်းသောစက်မှုလုပ်ငန်းက၎င်းကိုအစဉ်အလာအရခေါ်ဝေါ်သောကြောင့်သေစေနိုင်သောမဟုတ်သောထူးဆန်းခြင်းသို့မဟုတ် 'လေကြောင်းပြခြင်း' သည်ဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါကိုကြည့်ပါ ဘလော့ဂ် အဲဒီအပေါ်မှာ ဒါဆို porn ရဲ့ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှုတွေက ဘာတွေလဲ။
porn-သွေးဆောင် Erectile အလုပ်မဖြစ်
အထူးသဖြင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနေရာများရှိယနေ့အသက် ၄၀ နှစ်အောက်အမျိုးသားများသည်အမျိုးသားများပြောသောအဆိုးဝါးဆုံးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုသည် Erectile disfunction (ED) ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ၊ သူတို့သည်လိင်တံကိုမခိုင်မြဲအောင်မလုပ်နိုင်ကြပါ။ ကြည့်ပါ ED ပေါ်မှာဤတင်ပြချက် ဘာကြောင့်လဲဆိုတာကိုနားလည်ဖို့။ အခြားသူများအတွက်မူနှေးကွေးစွာသုတ်ရည်လွှတ်မှုသို့မဟုတ်တကယ့်မိတ်ဖက်များအားနှေးကွေးသောတုံ့ပြန်မှုမှာဖြစ်လေ့ရှိသည်။ သူတို့က porn ကိုသုံးတဲ့အချိန်မှာသူတို့ဟာတကယ့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ယောက်နဲ့လိင်ဆက်ဆံဖို့ကြိုးစားမှသာ ED ကိုမခံစားရဘူးဆိုတာသတိပြုပါ။ ဆိုလိုသည်မှာလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များမရှိသောအမျိုးသားများစွာသည်သူတို့၌ erectile ပြdevelopedနာရှိကြောင်းသတိမထားမိကြပါ။
အဖြစ်တက္ကသိုလ်ကိန်းဘရစ်ခဲသုတေသီ Valerie Voon said:
ကျန်းမာသန်စွမ်းသောစေတနာ့ဝန်ထမ်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် [အစွဲစွဲသူများ] သည်လိင်စိတ်နှိုးဆွမှုတွင်သိသိသာသာပိုမိုအခက်အခဲရှိခဲ့ပြီး၊
ဇနီးမောင်နှံနှစ် ဦး အတူတကွစုစည်းသောအခါ၎င်းသည်ကြီးလေးသောပြproblemsနာများဖြစ်စေနိုင်သည်။ မိတ်ဖက်နှစ် ဦး စလုံးသည်လိင်ဆိုင်ရာမလုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းသို့မဟုတ်အခြားသူတစ် ဦး ၏လိင်ဆန္ဒကိုမပြောဆိုနိုင်ခြင်းကြောင့်မလုံလောက်ဟုခံစားရနိုင်သည်။ ၎င်းသည်လူများစွာကို၎င်းတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များတွင်အရှက်ရစေခြင်း၊ အရှက်တကွဲအကျိုးနည်းခြင်း၊
ဒီဟာကိုကြည့်ပါ ဆောင်းပါး Guardian မှ“ Porn သည်လူငယ်များကိုအားနည်းစေသလား” ဟုခေါ်သည်။
ဥပမာအားဖြင့်ရိုးရာလူမှုအသိုင်းအ ၀ ိုင်းမှလူငယ်တစ်ယောက်သည်လက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုမတိုင်မီကမိမိကိုယ်ကိုအပျိုစင်အဖြစ်ထားရှိခဲ့သူဖြစ်သည်။ သူနှင့်သူ၏ဇနီးသည်အိမ်ထောင်ရေးကိုအဆုံးသတ်ရန်ကြိုးစားသောအခါသူသည်လိင်ဆိုင်ရာမလုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပါ။ သူသည်သူ၏လိင်မှုကိစ္စနှင့်လိင်ဆက်ဆံမှုကိုလိင်ဆက်ဆံမှုပြုခြင်းနှင့်မချိတ်ဆက်ခဲ့သောကြောင့်၎င်းမှာနှစ်နှစ်ကြာမြင့်ခဲ့သည်။ ဤအချိန်တွင်သူ၏ဇနီးကသူမကွာရှင်းလိုသည်ဟုပြောခဲ့သည်။ ထိုအချိန်တွင်သာလူငယ်သည် Gary Wilson ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည် TEDx ဟောပြောပွဲ, သူသည်ကြာရှည်စွာညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုမှုကြောင့် erectile ရှုံးနိမ့်မှုသို့ ဦး တည်နိုင်သည်ကိုသူရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သလား သူ့ဇနီးကဒီရောဂါပျောက်ကင်းနိုင်တဲ့အခြေအနေကြောင့်ကွာရှင်းမှုတရားစွဲဆိုမှုကိုဖျက်သိမ်းမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကြောင့်လက်ထပ်ခြင်းနှင့်ဆက်နွယ်မှုပေါင်းမည်မျှရှိပါသနည်း။
သတင်းကောင်းမှာယောက်ျားများသည်အင်တာနက်အပြာများကိုခဏတဖြုတ်စွန့်လွှတ်လိုက်သည့်အခါ၎င်းတို့၏ erectile function ကိုပြန်လည်ရရှိနိုင်ကြသည်။ ခေါင်းမာသောဖြစ်ရပ်များတွင်လနှင့်နှစ်များကြာနိုင်သည်။ ထူးဆန်းသည်မှာလူငယ်များသည်အသက်ကြီးသူများထက်သူတို့၏ Mojo ကိုပြန်လည်ရယူရန်အချိန်များစွာလိုအပ်သည်။ အကြောင်းမှာသက်ကြီးရွယ်အိုများသည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများကိုမဂ္ဂဇင်းများ၊ ရုပ်ရှင်များဖြင့်စတင်ခဲ့ခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်ထိတွေ့ခြင်းသည်များသောအားဖြင့်ပြင်းထန်။ မတည်မြဲသောနက်ရှိုင်းမှုကိုဖန်တီးရန်ဖြစ်သည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအေးစက် နှင့်စောင့်ကြည့်အင်တာနက်ကဗီဒီယိုညစ်ညမ်းဖန်တီး pathways ။ အသက်အရွယ်နုပျိုသောယောက်ျား, အစားသူတို့ရဲ့စိတ်ကူးစိတ်သန်းကိုအသုံးပြုဖို့ထက်အလွန်ရှည်လျားသောကာလအဘို့အတူတကွဟောင်းခေတ်လမ်း porn နှင့်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေကိုအသုံးပြုပါ။
• အီတလီနိုင်ငံ 2013- အသက် 17-40၊ ငယ်ရွယ်သောလူနာများတွင် အသက်ကြီးသူများထက် ပြင်းထန်သော Erectile Dysfunction (49%) ရှိခဲ့ပါသည်။ အပြည့်အစုံ လေ့လာနိုင်ပါပြီ။ ဒီမှာ.
•အမေရိကန်နိုင်ငံ 2014: အသက်အရွယ် 16-21, 54% လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများ; 27% Erectile အလုပ်မဖြစ်; အော်ဂဇင်နှင့်အတူ 24% ပြဿနာများကို။ အဆိုပါသုတေသန၏တစ်ဦးကအကျဉ်းချုပ်ရရှိနိုင် ဒီမှာ.
• UK 2013- အသက် 16-20 နှစ်အရွယ် ယောက်ျားလေးများ၏ ငါးပုံတစ်ပုံသည် ၎င်းတို့သည် "စစ်မှန်သောလိင်ဆက်ဆံမှုအတွက် လှုံ့ဆော်ပေးသည့်အရာအဖြစ် ညစ်ညမ်းမှုကို မှီခိုနေရသည်" ဟု East London တက္ကသိုလ်သို့ ပြောကြားခဲ့သည်။ ယင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် သတင်းဆောင်းပါးကို ရရှိနိုင်ပါသည်။ ဒီမှာ.
တစ်ဦးခုနှစ်တွင်• ကင်းဘရစ်တက္ကသိုလ်က 2014 ထဲက 25 ပျမ်းမျှအသက် 11 အတွက်လေ့လာမှု, ဒါပေမယ့် 19 porn ကိုအသုံးပြုခြင်းမဟုတ်ဘဲညစ်ညမ်းအတူမိတ်ဖက်နှင့်အတူပညာရေး / လျော့နည်းသွားလိင်စိတ်ဖြစ်ပေါ်စေဟုပြောသည်။
အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးကြား ပါဝါဆက်ဆံရေးတွင် ဆယ်စုနှစ်များစွာ တိုးတက်လာပြီးနောက်၊ အရာများ ပြောင်းလဲလာခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့် လိင်ဆက်ဆံမှုတွင် အမျိုးသားအချို့သည် ပို၍လွှမ်းမိုးပြီး ရန်လိုလာကြောင်း မကြာသေးမီက အထောက်အထားများစွာရှိသည်။ ဤမလိုလားအပ်သော အပြုအမူသည် အမျိုးသားများ၏ အင်တာနက် ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ သုံးစွဲမှုကြောင့် အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ တွန်းပို့နေပုံပေါ်သည်။
A 2010 လေ့လာချက် အရောင်းရဆုံး ဒီဗီဒီများ၏ အကြောင်းအရာကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာထားသည့် ပြကွက် 304 ခုတွင် 88.2% တွင် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ရန်လိုမှု ပါ၀င်ကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဤသည်မှာ အဓိကအားဖြင့် ပုတ်ခတ်ခြင်း၊ ပါးစပ်နှင့် ပါးရိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၊ မြင်ကွင်းများ၏ ၄၈.၇% တွင် နှုတ်ဖြင့်ရန်လိုမှု၊ အဓိကအားဖြင့် နာမည်ခေါ်ဆိုမှုပါရှိသည်။ ရန်လိုမှုကျူးလွန်သူများသည် များသောအားဖြင့် အမျိုးသားများဖြစ်ပြီး၊ ရန်စရန်ပစ်မှတ်များမှာ အမျိုးသမီးအများစုဖြစ်သည်။ ပစ်မှတ်များသည် ရန်စမှုအပေါ် ကျေနပ်မှု သို့မဟုတ် တုံ့ပြန်မှုကို မကြာခဏဆိုသလို ပြသလေ့ရှိသည်။
ဒီသုတေသနအပေါ်အဆောက်အအုံယောက်ျားအများဆုံးကြီးစိုးအတွက်စေ့စပ်ခဲ့တဲ့တွေ့ရှိခဲ့ရသောအသစ်ထုတ်ဝေဂျာမန်လေ့လာမှုဖြစ်ပါတယ် လိင်က coercive အပြုအမူတွေကိုအများဆုံးမကြာခဏညစ်ညမ်းစားသုံးသူကိုမှန်မှန်လိင်မတိုင်မီသို့မဟုတ်ကာလအတွင်းအရက်ကိုလောင်တဲ့သူတွေကိုဖြစ်ကြသည်။
ဤ လေ့လာချက် မကြာသေးမီက ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုတွင် တွေ့ရှိခဲ့သော လွှမ်းမိုးထားသော အပြုအမူအမျိုးမျိုးတွင် ဂျာမန် လိင်ကွဲအမျိုးသားများ၏ စိတ်ဝင်စားမှုနှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကို စစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့သည်။ လူကြိုက်များသော ညစ်ညမ်းရုပ်ရှင်များကို ကြည့်ရှုခြင်း သို့မဟုတ် ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကို မကြာခဏ သုံးစွဲခြင်း သို့မဟုတ် ဆံပင်ဆွဲခြင်း၊ မိတ်ဖက်ကို ပုတ်ခတ်ခြင်းစသည့် အပြုအမူများတွင် ပါဝင်လိုသောဆန္ဒနှင့် ဆက်စပ်နေပါသည်၊ (ဥပမာ- လက်တွဲဖော်၏ စအို သို့မဟုတ် မိန်းမအင်္ဂါကို အခြားသူနှင့် တပြိုင်နက် ထိုးဖောက်ခြင်း)၊ ဖင်မှ ပါးစပ် (ဆိုလိုသည်မှာ အဖော်၏ ပါးစပ်ထဲသို့ လိင်တံကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီး လိင်တံကို တိုက်ရိုက် ထိုးသွင်းခြင်း)၊ လိင်တံကို ပါးစပ်ဟခြင်း၊ မျက်နှာကို ပါးရိုက်ခြင်း၊ နှာစေးခြင်းနှင့် နာမည်ခေါ်ခြင်း (ဥပမာ၊ “ slut” သို့မဟုတ် “ပြည်တန်ဆာ”)။ အမျိုးသားများ၏ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကျပ်ကိုင်ခံရနိုင်ခြေအပေါ် အရက်နှင့် ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ ထိတွေ့မှုအပေါ် သက်ရောက်မှုအပေါ် ယခင်စမ်းသပ်သုတေသနပြုချက်များအရ အထင်ရှားဆုံး အပြုအမူများတွင် ပါဝင်ခဲ့သည့် အမျိုးသားများသည် မကြာခဏ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကို မကြာခဏ သောက်သုံးသူများဖြစ်ပြီး လိင်မဆက်ဆံမီ သို့မဟုတ် ကာလအတွင်း ပုံမှန်အရက်သောက်သူများဖြစ်သည်။
ပါးစပ်ဖြင့် လိင်ဆက်ဆံခြင်း၊ နှစ်ချက်ထိုးဖောက်ခြင်း သို့မဟုတ် မျက်နှာတွင် သုက်လွှတ်ခြင်းကဲ့သို့သော အမြင်အာရုံကို လှုံ့ဆော်ပေးသည့် လှုပ်ရှားမှုများကို ပြသရန် ညစ်ညမ်းကို ပြုလုပ်ထားသည်။ သို့သော်လည်း ဖျော်ဖြေတင်ဆက်သူများသည် အခကြေးငွေပေးဆောင်ခြင်း သို့မဟုတ် သာမာန်ရွေးချယ်မှုဖြင့် ပြုလုပ်ခြင်းမဟုတ်သည့် အရာများကို အတင်းအကျပ်လုပ်ခြင်း ခံရသည်။ အမျိုးသမီး အပြာအကျော်အမော် အများအပြားသည် အပြာလုပ်ငန်းတွင် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ လူကုန်ကူးခံခဲ့ရသည်။
ညစ်ညမ်းလုပ်ငန်းသည် အများအားဖြင့် စည်းကြပ်မှုမရှိသော ပတ်ဝန်းကျင်တွင် လုပ်ကိုင်သည်။ ကျန်းမာရေးအတွက် အလွန်အန္တရာယ်များသော လှုပ်ရှားမှုများကို ပြသလေ့ရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့် ကွန်ဒုံးမပါဘဲ လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသုံးပြုမှုရှိသည်။ ကွန်ဒုံးအသုံးပြုခြင်းသည် လိင်ဆက်ဆံမှုတွင် သရုပ်ဖော်ထားသော အစစ်အမှန်ပုံပေါ်မှု နည်းပါးစေပြီး အမြင်အာရုံထိခိုက်မှု နည်းပါးစေသည်။ ကွန်ဒုံးများကို ရှောင်ကြဉ်ခြင်းဖြင့် ညစ်ညမ်းထုတ်လုပ်သူများသည် ခန္ဓာကိုယ်တွင်းအရည်များ အများဆုံးဖလှယ်မှုကို ပြသနိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ 'အပူဆုံးလိင်' ပါ၀င်သည် ။ ဒါပေမယ့်လည်း သင့်ကိုယ်ပိုင်လိင်ဘဝအတွက် အန္တရာယ်အရှိဆုံး ရွေးချယ်စရာတွေကို သင့်အတွက် သရုပ်ပြနေပါတယ်။
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနှင့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်သူများက မိတ်ဖက်အသစ်များအားလုံးကို ၎င်းတို့ဘာအတွက် ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် အကြံပြုထားသည်။ ၎င်းတို့သည် HIV/AIDS အပါအဝင် လိင်မှတစ်ဆင့် ကူးစက်နိုင်သော ကူးစက်ရောဂါများ (STIs) ၏ ဖြစ်နိုင်ခြေအရင်းအမြစ်များဖြစ်သည်။ တကယ့်လက်တွဲဖော်နဲ့ လိင်ဆက်ဆံတာက အန္တရာယ်များတဲ့ ကိစ္စပါ။ အန္တရာယ်အဆင့်ကို စီမံခန့်ခွဲရန် သင်နှင့် သင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အပေါ်တွင် မူတည်သည်။
<< စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆိုးကျိုးများ စိတ်ဖိစီးမှု >>